Ex Madaxweyne Sheekh Shariif Oo ka Hadlay Khilaafka Ka Dhaxeeya Imaaraadka Carabta Iyo Dawladda Farmaajo
Tuesday 17th April 2018 11:41:03 in Wararka by Super Admin
Muqdisho (GGN)-Madaxweynihii hore ee Somalia Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa markii ugu horeysay ka hadlay Khilaaf Siyaasadeedka dowlada Somalia kala dhexeeya dalka Isutaga Imaaraadka carabta. Sheekh Shariif Sheekh, oo wareysi gaar ah siinaayay Telefashinka Al-Carabiya ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu ahaa mid fog oo soo jireen ah.
Sheekh Shariif Sheekh, waxa uu tilmaamay in xiriirka soo jiray uu ahaa mid ka fac weyn kan iminka Somalia kala dhexeeya dhowr dal oo iminka saaxiib la’ ah Somalia. Waxa uu Sheekh Shariif Sheekh, ku baaqay in Khilaafka Somalia iminka kala dhexeeya Imaaraadka Carabta lagu xaliyo wadahadal si meesha looga saaro waxa uu ugu yeeray Tashwiishka. Xiriirka Somalia kala dhexeeya Imaaraadka ayuu sheegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed inaanu ku ekeen Siyaasad, balse uu gaarsiisan yahay heer Ganacsi, waxa uuna qiray inuu jiro xiriir Ganacsi oo aad u wanaagsan.
Madaxweynihii hore ee Somalia Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa sidoo kale tilmaamay in Imaaraadka uu qeyb ka yahay Dowladaha Somalia ka taageeraya la dagaalanka al-shabaab, sidaa aawgeedna la doonaayo in dowlada ay dhinacyo badan ka eegto xaalada jirta.
‘’Dowlada Imaaraadka wey cadahay wanaaga kala dhexeeyay Somalia, waxaa jiray xiriir soo jireen oo isugu jiray dhan waliba, anigu waxaan qaba in xal laga gaaro khilaafka dheeraaday ee ka dhexeeya labada dal’’
‘’Hadii uu yimaado khilaaf ama is fahan waxaa muhiim ah in lagu xaliyo wadada saxda ah, waxaan Baarlamaanka,Xukuumadda iyo Madaxda Dowladda ugu baaqayaa in arrintan ay dadaal dheer u galaan sidii loo xalin lahaa, si shacabka aanay u dareemin niyad jab.” Sidoo kale, waxa uu Sheekh Shariif sheegay inay dareemayaan heerka uu iminka gaarsiisan yahay Khilaafka, balse waxa uu ku taliyay in loo degdego dhanka wanaaga iyo xalka.
Dhinaca kale, Khilaafka u dhaxeeya labadan wadan ayaa xoogeystay kadib markii Xukuumadda Somalia ay cambaareysay saldhigga Imaaraadka uu ka dhisayo degaanada Somaliland iyo markii Ciidanka NISA ay la wareegeen lacag Imaaraadka Carabta uga soo degtay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho.